आङ सिरिङ्ग हुने यस्तो क्रिया, तपाईंको अनुहारमा हिँड्छन् हजारौं कीरा ! – नेपाली सूर्य
January 19, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on आङ सिरिङ्ग हुने यस्तो क्रिया, तपाईंको अनुहारमा हिँड्छन् हजारौं कीरा !
एजेन्सी । मानिसको अनुहारमा हज्जारौ किरा हिँडिरहेका हुन्छन् । यो वास्तविक तथ्य हो । अनुहारलाई फोहोर नै छोड्ने खालको हुनुहुन्छ ? तपाईं जस्तो खालको भएपनि तपाईंको अनुहारमा हजारौं कीरा सल्बलाइरहेका छन् । यो कुनै गफ हैन । अनुहारमा हिँड्ने कीराका सम्बन्धमा सन् १८४२ मै खोज भएको थियो । कानमा जम्ने फोहोरमा यो कीरा भेटिएको थियो । यो सूक्ष्मजीवको आठवटा खुट्टा हुन्छन् र यो माकुराको प्रजातिको हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
हुन त यी ब्याक्टेरियाबाट छुटकारा पाउनका लागि उपचारको सुविधा छ तर यिनीहरूलाई जरैबाट हटाउन असम्भव छ । उपचार गरेको ६ हप्तामा यिनीहरू अनुहारमा आइहाल्छन् । तपाईंमा भएको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताले यी ब्याक्टेरियासँग कत्तिको लड्न सक्छन् भन्ने कुरा निर्धारित गर्छ
September 24, 2020 Nepali Surya
ज्योतिष नियम : हप्ताका यी दिनहरुमा भुलेर पनि नलिनुहोस् ऋण, ऋण लिन-दिन यी बार अशुभ !